Ny angovo Dhamma: inona izany, inona no ataony ary inona no tetikasa ananany | Green Renewable
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia mihamitombo hatrany amin'ny orinasa sy ny tetikasa izay manandrana manao izany angovo izany ho zavatra mandroso kokoa. Ny iray amin'ireo orinasa miloka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia angovo Dhamma. Ny vondrona Dhamma Energy dia mamolavola, manorina ary miasa amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ny tantaran'ny angovo Dhamma, ireo tetikasa manan-danja indrindra ary ny fomba fiasany.
1 ny fiandohana
2 Tetik'asa angovo Dhamma
3 Rafitra sy famatsiam-bola ny angovo Dhamma
4 Fizarana hydrogène any Espaina
5 Ny angovo Dhamma sy ny fanorenana azy
Ny asan'ny Dhamma Energy any Frantsa sy Espaina dia novidin'ny Eni gas e luce, sampana 2021% an'ny Eni SpA tamin'ny Oktobra 100.
Nanomboka niasa tany Frantsa sy Espaina ny Dhamma Energy folo taona mahery lasa izay, izay namolavolany ny tetikasa solar voalohany. Avy eo, Ny Dhamma Energy dia nampitombo ny asany tany Frantsa, izay nanorenany ny valan-javaboarin'ny masoandro manokana.
Tamin'ny taona 2013, nanokatra sampana iray any Meksika i Dhamma Energy, izay namolavola toby famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro 470 MWp ary manana portfolio 2 GWp amin'izao fotoana izao. Mandritra izany fotoana izany, ny vondrona dia miasa amin'ny tetikasa photovoltaic voalohany any Afrika, zaridainan'ny masoandro 2 MWp any Maorisy, izay nisokatra tamin'ny taona 2015.
Hatramin'izao, ny Dhamma Energy dia nahavita ny fampandrosoana ny 650 MW amin'ny toby famokarana herinaratra photovoltaic, izay hita indrindra any Mexico, Frantsa ary Afrika. Dhamma Energy amin'izao fotoana izao dia manana fantsona 2 GWp miasa any Mexico. Ny ekipan'ny Dhamma Energy dia ahitana mpitantana tetikasa, injeniera ary manampahaizana ara-teknika amin'ny sehatry ny photovoltaic.
Tetik'asa angovo Dhamma
Nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny traikefa azony, dia lasa mpitarika mahaleo tena izy ireo amin'ny fampivoarana ireo toby famokarana herinaratra photovoltaic sy famokarana angovo avy amin'ny masoandro. Amin'ny maha-mpamorona, mpanamboatra, mpandraharaha ary mpampiasa vola amin'ny fotovoltaika, izy ireo dia mandrakotra ny tsingerin'ny fiainana manontolo amin'ny tetikasa: manomboka amin’ny fikarohana ny tany ka hatramin’ny fikojakojana sy ny fitantanana ny valan-javaboary photovoltaic.
Ny ekipa dia mandrakotra ny dingana rehetra amin'ny fampandrosoana ny tetikasa PV solar, ao anatin'izany ny fandalinana azo atao, ny fanadihadiana topografika, ny fandalinana ny tontolo iainana, ny fanombanana ny toerana, ny foto-kevitra momba ny fametrahana, ny fanombanana ara-teknika, ny famakafakana ny politika sy ny fitsipika, ny fahafaha-manao ara-bola, ny fametrahana ny fividianana herinaratra (PPA).
Ny Dhamma Energy dia miara-miasa amin'ireo mpamatsy iraisam-pirenena lehibe (module photovoltaic, inverters, rafitra fitahirizana). Iray amin'ireo sehatry ny asan'ny Dhamma Energy ny fitantanana ny fananganana tetikasa photovoltaic. Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiasam-bola ihany koa ny Dhamma Energy mandra-pahatongan'ny dingana fanombohana ny tetikasa.
Miaraha miasa amin'ny manam-pahaizana manokana sy installer izay manana traikefa be dia be amin'ny sehatra. Ny Dhamma Energy dia nahomby tamin'ny famolavolana sy nanangana tetik'asa momba ny masoandro eo an-tampon-trano sy tany izay miasa amin'izao fotoana izao.
Rafitra sy famatsiam-bola ny angovo Dhamma
Iray amin'ireo dingana lehibe amin'ny tetikasa ny fandrafetana sy famatsiam-bola. Ao amin'ity orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro ity, manana traikefa, fahalalana ary fahaiza-manao izy ireo amin'ny fiarovana ny famatsiam-bola sy ny fiarovana ny famatsiam-bola mahomby amin'ny orinasa mpamokatra angovo azo avy amin'ny masoandro sy lehibe araka ny fepetra samihafa. Ny traikefany dia mirakitra ny famatsiam-bola mitovy ary koa ny fifanarahana trosa maharitra amin'ny banky ara-barotra sy ny fikambanana marolafy.
Izy ireo dia mandray anjara amin'ny tsingerin'ny fiainan'ny tetikasa ary manara-maso ny fanombohana ny tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro ary rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny varotra izy ireo dia mamolavola sy miasa ireo tetikasa ireo. Tafiditra ao anatin’ny orinasa ny famokarana angovo avy amin’ny masoandro.
Manana toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy ireo amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny ozinina antonony sy lehibe mipetaka amin'ny tany, ary koa ireo orinasa ambony tafo, izay any Frantsa indrindra.
Fizarana hydrogène any Espaina
Ny fizarana hydrogène maitso amin'ny tetikasa Eoropeana dia hanomboka any Espaina miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny Enagás, Naturgy ary Dhamma Energy. Ny tetikasa HyDeal Ambition dia mikendry ny hamolavola rojo fizarana Eoropeana ho an'ny hydrogène maitso amin'ny vidiny mifaninana any Espaina, izay hanombohan’ny famokarana herinaratra amin’ny taona ho avy, izay tanjona 10 megawatts isan-taona.
Ny niandohan'ity angovo azo havaozina ity dia ny famokarana hydrogène maitso amin'ny alàlan'ny electrolyse avy amin'ny masoandro, izay ahafahan'ny vidin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny programa, izay hanao ny dingana voalohany amin'ny 2022 ary mikendry ny hahatratra 85 GW. ny herin'ny masoandro sy ny 67 GW. ny herin'ny masoandro. Watts amin'ny famokarana herinaratra elektrika amin'ny 2030.
Izany dia maneho 3,6 tapitrisa taonina ny hidrôzenina maitso isan-taona, mitovy amin'ny roa volana ny fampiasana solika any Espaina, izay hozaraina amin'ny alalan'ny fitahirizana entona voajanahary sy ny tambajotra fitaterana an'ireo orinasa mandray anjara amin'ny hetsika. Ny vidin'ny mpanjifa dia tombanana amin'ny 1,5 EUR/kg, izay azo ampitahaina amin'ny vidin'ny solika fôsily amin'izao fotoana izao, fa tsy miteraka loto.
Ankoatra ireo orinasa Espaniola telo Enegas, Naturgy ary Dhamma Energy, mandray anjara koa ireo orinasa lehibe hafa avy any amin’ny faritra hafa any Eoropa, toa ny Falck Renewables (Italia), Gazel Energie (France), GTTGaz (France), HDF Energie (France). , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Germany), Qair (France), Snam (Italy), Teréga (France), Vinci Construction (France)… hatramin'ny orinasa 30 mandray anjara. Orinasa avy amin’ny sehatra samihafa toy ny fampandrosoana ny masoandro, ny fanamboarana fitaovana elektrôlôzôly, ny injeniera, ary ny famatsiam-bola ho an’ny fotodrafitrasa sy ny mpanolotsaina.
Ny angovo Dhamma sy ny fanorenana azy
Tamin'ity taona 2021 tamin'ny volana Mey ity, ny angovo Dhamma dia nangataka fahazoan-dàlana amin'ny fametrahana herinaratra ny orinasa mpamokatra herinaratra avo lenta antsoina hoe "Cerrillares I photovoltaic solar plant". Ny fampandrosoana ny tetikasa, izay ho hita eo anelanelan'ny tanànan'i Jumilla sy Yecla, mampiseho fampiasam-bola tombanana ho 30 tapitrisa euros, izay 28 tapitrisa euros mifanandrify amin'ny fametrahana elektrônika ambany volta amin'ny orinasa mpamokatra masoandro amin'ny tany, arahin'ny horizontaly amin'ny axe iray.
Etsy ankilany, 1 tapitrisa euros no hampiasaina amin'ny tariby fifindran'ny ivelany mba hialana amin'ny angovo azo (12.617 metatra ny halavany) sy 742.000 euros amin'ny tobin-tsolika. Ny valan-javaboary masoandro dia hipetraka amin'ny 95 hektara ary, rehefa miasa, hamokatra herinaratra 97,5 GWh isan-taona izany. Ity vokatra ity dia mitovy amin'ny fanjifana tokantrano 30.000 eo ho eo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny angovo Dhamma sy ny tetikasany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » angovo dharma
Ahoana no insulation trano amin`ny hatsiaka amin`ny ririnina?